Euthanasia, oviana ny alika no tokony hamonoana ny alika? | Tontolo alika
Mamono ny alikako ve aho? Ity dia fanontaniana iray izay indrisy fa maro ny olona no manontany tena na ho ela na ho haingana, ary izany no izy jereo ny fijalian'ilay biby tena maharary ary maro ny dokotera mpitsabo no manome torohevitra ny euthanasie.
Raha mieritreritra ianao amboary ny alikanaoAza manome tsiny ny tenanao, vakio ny lahatsoratray momba ny fomba hitantanana ny fahafatesan'ny biby fiompy amin'ny antsipiriany, fa mitandrema, ny sasany amin'ireo mpitsabo biby dia manoro hevitra ny euthanasia amin'ny zavatra azo tantanana tanteraka, toy ny paralysis amin'ny rantsambatana ary tsy hoe lasa alikaola ny alika iray, tsy manana safidy hiaina fiainana ara-dalàna amin'ny sezakodia io, alika maro no miaina toy izao, ka ny euthanasia dia ho an'ny tranga faran'izay mafy.
Raha voarara ho an'ny olombelona ny euthanasia, maninona ary no avela ny biby? ¿Rariny raha tapitra ny ain'ny zavaboary?
Ity dia olana tena mampiady hevitra ary maro no manana hevitra mifanipaka, saingy azo atao ihany ny mahafantatra izay hataontsika raha mifanatrika amin'ny fandraisana io fanapahan-kevitra io isika, ka tsy anjarantsika ny mitsara ny fanapahan-kevitr'olona. Ny fanapahan-kevitra ho an'ny euthanasie (euthanize ny alika) tsy tokony noho ny fandaniana ara-pahasalamana na ny tsy fahampian'ny fotoana hikarakarana ilay biby, io fanapahan-kevitra io dia tokony horaisina miaraka amin'ny mpitsabo biby, izay hanaraka fepetra fitsaboana, mazàna amin'ny tranga tsy azo ovaina izay tsy ahafahan'ny fanarenana ny biby intsony.
Ny Federal Council of Veterinary Medicine (CFMV) dia namoaka torolàlana ho amin'ny tsara fomba fanao ho an'ny euthanasia biby, izay mihevitra ny fahafahan'ny biby mahatsapa, mandika ary mamaly ireo fanentanana maharary sy ny fijaliana.
Ity torolàlana ity dia natao ho an'ny mitarika mpitsabo biby sy tompona ny biby amin'ny fanapaha-kevitra momba ny euthanasia sy ny fomba ampiasaina, ary araky ny torolàlana dia ho hita ny euthanasia rehefa:
Ny fiahiana ny biby dia tsy azo ihodivirana, tsy misy fifehezana fanafody fanaintainana na fanafody mampitony
Ny toetran'ny biby dia a fandrahonana ho an'ny fahasalamam-bahoaka (raha manana ny alika ny rabiye, ohatra)
Rehefa ilay biby marary mampidi-doza ny biby hafa na ny tontolo iainana
Rehefa ny biby no tanjon'ny fampianarana na ny fikarohana
Rehefa misolo tena azy ireo vidiny tsy mifanaraka amin'ny hetsika mamokatra, ohatra, ny biby natokana hohanin'ny olombelona, ​​ohatra na miaraka amin'ny loharanom-bola ara-bola an'ny tompony (Eo no idiran'ny tranga mpiaro fiarovana na hopitaly veterinera).
Vantany vao tapaka ny euthanasia, dia hampiasa fomba hampihenana ny tebiteby, tahotra ary fanaintainan'ny biby. Ny fomba dia tokony hiteraka fahaverezan'ny fahatsiarovan-tena avy hatrany, arahin'ny fahafatesana. Ianao koa dia mila azo antoka ampy mba hahazoana antoka fa ny biby tsy ho tafavoaka velona amin'ny fomba, izay mety hiteraka fanaintainana sy fijaliana bebe kokoa aza.
1 Ny mahasamihafa ny euthanasia sy ny sorona
2 Fomba ampiasaina hanondrahana saka sy alika
3 Ahoana ny euthanasia amin'ny alika
4 Inona no hatao aloha sy mandritra ny euthanasia
4.1 Alohan'ny euthanasia
4.2 Mandritra ny euthanasia
4.3 Aiza no tsara kokoa ny euthanize?
5 Ohatrinona ny vidin'ny alikaola?
Ny mahasamihafa ny euthanasia sy ny sorona
Na dia heverinao fa mitovy aza ny euthanasia sy ny fahafoizan-tena, ny marina dia tsy izy ireo. Samy izy roa mahatafiditra ny fahaverezan'ny ain'ny alika, Saingy misy lesoka raha ny fieritreretana fa ny fahafoizan-tena sy ny euthanasia dia teny mitovy hevitra milaza ny fahafatesan'ny alika na biby hafa amin'ny fomba mitaona.
Mba hampazava aminao tsara ny tsy fitoviana dia misy sorona atao rehefa misy biby (alika, saka ...) entina ho faty nefa tsy manolotra karazana aretina na antony tokony hamoizany ny ainy. Raha atao teny hafa dia miresaka biby mahasalama izay tsy manana olana amin'ny fiainana isika.
Etsy ankilany, ny euthanasia, araka ny efa hitanao teo aloha, dia momba ny fahafates "mihaja" omena ny alika, na biby hafa, mba hijanonany tsy hijangajangana tsy misy fotony satria tsy ho sitrana ny toe-pahasalamany.
Mazava ho azy, ny fahafoizan-tena dia matetika no resahina rehefa avy amin'ny euthanasia, fa ny fahasamihafana dia tena mazava.
Raha ny marina, ary na dia henjana be aza izany, Alika sy saka 100.000 XNUMX no novonoina tany Espana. Ary tena fahafoizan-tena tokoa izany satria fanapahan-kevitra raisin'ny zanak'olombelona hialana amin'ilay biby izay tsy mila maty satria salama izy ireo. Ny olana dia ny be loatra ao anaty kennels noho ny fandaozana ireo biby izay midika fa, rehefa mihoatra ny fahaizany dia tsy maintsy manala ireo biby efa ela izy ireo ary tsy hanana fotoana faharoa hananana tsaratsara kokoa fiainana.
Fomba ampiasaina hanondrahana saka sy alika
Ny fomba heverina ho eken'ny Filan-kevitry ny Fitsaboana Federaly momba ny fitsaboana ny biby dia mety ho simika na ara-batana, araka ny toetoetran'ny karazana tsirairay, ary ny fomba fampiasa indrindra sy atolotry ny mpitsabo biby ho an'ny alika sy saka dia ny tsindrona zava-mahadomelina izay miteraka tsy fahampian'ny fahalalana ary ny fahafatesana faingana sy azo antoka.
Nefa tsy maintsy tadidinao fa io fanapahan-kevitra lehibe io miankina fotsiny izany ti ary tsy misy olona afaka mitsara anao amin'izany, satria misy ny mino fa ny tsara indrindra dia ny fampitsaharana ny fijalian'ilay biby, misy aza ny olona mino fa tsy maintsy mandeha ny fiainana ary tsy maintsy maty ho azy ilay biby.
Misy alika tonga amin'ny taona efa antitra ary na dia hitantsika tsara aza izy io ary tsy mampiseho soritr'aretina, dia tokony hovarintsika 100% fa tsy mijaly ilay biby, satria afaka mieritreritra am-pitiavan-tena isika fa afaka maharitra volana vitsivitsy hafa toy izao dia mijaly hatrany ny alikanay.
Ahoana ny euthanasia amin'ny alika
Rehefa tsy maintsy manapa-kevitra farany hanao veloma ny biby fiompinao ianao, ny euthanasia dia mety ho fomba iray hanamaivanana ny biby fiompinao ao anatin'io dingana io mba tsy hijaly intsony. Saingy mbola toe-javatra mampalahelo sy sarotra tokoa ny miatrika izany.
Na izany aza, indraindray ny fahafantarana ny fizotrany andalovany dia afaka manamaivana ny fanaintainana tsapanao kely.
Hanombohana, mpitsabo biby maro, miaraka amin'ny tanjona fa tsy hijaly be ilay biby, na noho izy mahatsapa fanaintainana, satria matahotra na mitebiteby ... Manome anao fanafody mampitony malemy fanahy izy ireo mba hampiala anao amin'ny tony. Mandritra izany fotoana izany dia afaka miaraka aminy ianao manao veloma ary afaka minitra vitsy dia hampiditra ny euthanasia izy. Ilay ampiasain'izy ireo matetika amin'ny pentobarbitar, zava-mahadomelina izay ampiasaina hitsaboana ny aretim-pivalanana nefa, raha ampiharina amin'ny fatra betsaka, dia mahatonga anao tsy hahatsiaro tena ary farany dia voan'ny aretim-po sy aretin'ny taovam-pisefoana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, manana tsy fahombiazan'ny fonao sy havokavokao ianao mamela ireo hiasa.
Satria tsy mahatsiaro tena ilay alika, dia tsy tsapany izay mitranga, ary tsy mijaly koa izy. Ho azy ireo dia toy ny hoe natory izy ireo ary tsy nifoha intsony. Mazava ho azy, ara-dalàna rehefa maty izy dia mazàna mazàna ny masony ary afaka mimi na mandoa akory aza izy; Ara-dalàna izany satria misy fitsaharana hozatra tanteraka izay manakana ny biby tsy hifehy ny vatany.
Inona no hatao aloha sy mandritra ny euthanasia
Fantatsika fa tsy mahafinaritra na mora ny mandalo an'io fotoana io. Fa hisy olona tsy afaka ho ao amin'ny efi-trano mitovy amin'ilay biby satria mihoatra ny azy ny fanaintainan'ny famoizana azy. Na izany aza, zavatra tena ilaina izany ary tena ilaina amin'ny alikanao. Ary hanazava ny antony isika.
Rehefa manapa-kevitra ny hampitsahatra ny fijalian'ny alika ianao, dia mamporisika anao izahay mandany fotoana miaraka aminy. Miezaha handany fotoana betsaka araka izay azonao atao mba ho eo anilany ka hahatsapany ho tony sy sambatra izy.
Raha azony atao dia milalao miaraka aminy, na mipetraha eo akaikiny fotsiny ary alao izy nefa tsy mieritreritra ny fotoana laninao. Ankasitrahanao izany rehefa lasa aho.
Mandritra ny euthanasia
Ho tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana ilay biby ary hatahotra. Ho sahiran-tsaina ianao, tsy hatahotra, ary hatahotra ny ho faty mihitsy raha sendra mahatsapa fanaintainana ianao na tsy mahafantatra izay hataony aminao. Ary koa, ho azy ny zava-dehibe indrindra dia ianao, ary tokony ho io no zavatra hitany talohan'ny nahafatesany. Noho izany, mamporisika anao izahay tsy hamela azy irery na miaraka amin'ny mpitsabo biby. Ho mahazo aina sy ho sambatra kokoa izy raha manana anao eo anilany.
Aza maninona mitomany na marary amin'izao fotoana izao eo imason'ny olona "hafahafa". Ho azy ireo dia fantatra izany toe-javatra izany ary hanampy anao hisaona mihitsy aza izy ireo. Ataovy ao an-tsaina fa misy maro biby izay tsy maintsy mamoaka ny tenany satria tsy mahay manovo hery ny tompony. Ary na izany aza ny biby dia mitady azy ireo ao anatin'ny minitra farany. Ny mijery ny havan-tiana maty dia zavatra sarotra tokoa ary tsy ny olona rehetra no vonona ny hanatanteraka izany. Fa sarotra kokoa ho an'ny alikanao ny maty irery raha tsy misy ny olona niara-nonina taminy sy nomeny be dia be.
Aiza no tsara kokoa ny euthanize?
Noho io toe-javatra io, maro ny dokotera no manolotra ny mody any euthanize amin'izay dia mahazo aina kokoa ilay biby ary ny minitra farany dia amin'ny toerana fantany sy tiany.
Tsy mila mandeha any amin'ny tobim-pahasalamana ianao, na dia tsy ny matihanina rehetra aza no manome an'io toerana io.
Ohatrinona ny vidin'ny alikaola?
Rehefa tsy maintsy manapa-kevitra ny hamono ny alikanao ianao, ny vola lany angamba no tsy hitanao indrindra amin'io fotoana io satria ny fihetseham-ponao, ary ny zava-misy ny fanaovam-beloma ny "namana" iray izay niaraka taminao nandritra ny taona maro teo amin'ny fiainanao. zava-dehibe.
Na izany aza, na eo aza ny toe-javatra, tsara fa fantatrao ny fandaniana mety ho lany amin'izany mba ho vonona ianao handray izany ary tsy hanakana anao tsy hanamaivana ilay namanao akaiky indrindra raha mijaly izy.
Ny fizotran'ny euthanasia dia mety mitentina 100 ka hatramin'ny 200 euro eo ho eo aminao. Amin'io dia tsy maintsy ampiana ianao raha tianao ny mpitsabo biby handoro ny vatan'ny biby, na te hahazo urn ianao miaraka amin'ny lavenony, izay mety hidika ho fiakarana eo anelanelan'ny 100 sy 500 euro bebe kokoa.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny euthanasia dia azo atao ao an-tranon'ilay biby, fa amin'ny tranga sasany dia mitaky vola fanampiny ho an'ny fitsangatsanganana ireo mpitsabo biby.
Na inona na inona fanapahan-kevitrao, dia tadidio foana fa nanao izay tsara indrindra vitanao ianao, indrindra rehefa nanome azy a fiainana mihaja sy sambatra amin'ny alikanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Euthanasia, oviana ny alika no tokony hamonoana ny alika?
Barbara dia hoy izy:
Salama, manana alika avy amin'ny karazana Dogo Arzantina aho, hanao ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany izy amin'ny volana feb. Tsy vao sambany nanaikitra ny zanako aho ary nampianatra azy izahay fa indraindray dia masiaka rehefa miteny azy ianao avelao ny lakozia na andefaso any aminy ny eritreriny sotro eo aminao ary mijery anao ratsy izy ary indraindray lasa mahery setra ara-dalàna izy niverina manaikitra ny zanako lahy ary indraindray tsy afaka mifehy azy aho, tsy tadiavin'ny vadiko any an-trano intsony satria nanaikitra azy koa izy namela azy, ary manao chemo aho ary tsy fantatro izay hatao aminy raha soroko izy satria tsy handratra olona hafa intsony aho satria heveriko fa tsy misy te hanangana azy ho lehibe.
Valiny amin'i Barbara